Xayawaanka Loo Yaqaano Idaha oo ‘aqoonsan kara wajiyada Dadka Ku Cusub Iyo Kuwa Aan Ku Cusbayn + Halkan kala Soco Sababta
Hargaysa(GNA) Warbixin Xiiso Badan oo Xaasaasiya
Image captionIdaha waxaa la sheegay in ay leeyihiin awood la mid ah tan dadka oo ay ku aqoonsan karaan wajiyada
Cilmi Baaris ay samaysay jaamacadda Cambridge ayaa lagu sheegay in idaha ay kala aqoonsan karaan wajiyada dadka kuwa ay markasta arkaan iyo kuwa ku cusub.
Jaamacadda ayaa 8 hal neef oo ido ah ku tabobabaray wajiyada atooraha lagu magacaabo Jake Gyllenhaal, Emma Watson , madaxweynihii hore ee Maraykanka iyo Wariye BBC-da ka tirsan oo lagu magacaabo Fiona Bruce.
Tabobarka kadib, neefafkan idaha ayaa markasta dooranayay sawirka wajiga qofkii uu horey u arkay, isaga oo ka leexanayay wajiyada uusan aqoonin.
Waxa ay tan caddaysay in idaha ay aqoonsan karaan wajiyada ay markasta arkaan.
Cilmi Baaris horay loo sameeyay waxa ay muujisay in idaha ay aqoonsan karaan idaha kale ee isku meel ay ku noolyihiin iyo waliba dadka iyaga xanaaneeya.
Prof Jenny Morton ayaa sheegtay in in afar neef oo ido ah loo tabobaray in ay aqoonsadaan wajiyada afarta qof ee caanka ah, waxaa sidoo kale idahan dhinacyo kale duwan laga tusay isla sawiradaasi, markastana waa ay aqoonsadaan.
Aqoonsiga wajiyada waxa ay idaha kala mid yihiin dameeraha, iyo daanyeerada.
Waxase ay cilmi baarayaasha in ay tahay arrin xiiso leh in la ogaado in idaha ay aqoonsan karaan shucuurta kala duwan ee bini’aadamka.
Previous: Daawo:Ciidagalaw Muuse Waa Nin Reer Hargaysa ah Laakiin Ninkaa Oodweyne ka yimi Hargaysa ha idinka Raro …Eng Faysal cali waraabe oo Beeshiisa u soo Bandhigay inuu Muuse Biixi ka Xigo Cirro isagoo kula taliyay inay Codkooda kula Dagaalamaan Murashax Cirro
Next: Madaxwaynaha Somaliland Oo Kulan Layeeshay Ururadda Bulshadda Somaliland;